Iyyannaa Abbaa Torbeef!
HomeAfaan OromooIyyannaa Abbaa Torbeef!
Damee Boruutin, Guraandhala 15, 2019
Torbaan darban kana keessa Shira Sadarkaa ol’aantummaa qabuun humnoota Habashaa Warra farra Uuummata Oromoo tahaniin qindaa’ee deemaa jiru saaxiluuf tattaafachaan ture. Humni kun dhoksaan dukkanaan daatee waan hojjetuuf Humna Dukkanaa (Dark forces) jechuu fedhe. Waan lafa jala hojjetuuf Mootummaan Abiyii fi Lammaa illee adda baasanii beekaa hin jiran. Garuu qeensa isaanii MNO fi mootummaa Federaalaa keessa galshanii jiru.
Har’a maqaa mootummaan ilmaan Oromoo qaroo tahan hiisisuu fi ajjeesiisu irra darbanii sadarkaa Oromummaa itti dhabamsiisuuf shira xaxuu danda,an gahanii jiru. Ilmaan Oromoo Qaroo tahan shira deemaa jiru kana akka argan mamii hin qabu. Haa tahu malee akkuman yaroo darbee “Uummata Oromoo Maalitu Adda Godha?” maxxansaa tokko barreesse ayyaan ilaallatummaa fokkisaatu saba keenya keessa jira.
Shira maqaa Araara Abbootii Gadaa fi Haadha Siiqqeen WBO hikaachiisanii fixxuuf qopha’e keessa akka mootummatti Motummaan Kononel Abiyi keessa hin jiru. Itti Aaanan Ajajaa Waraana Imaayara Itoopiyaa kabjamoon B.J. Biraanuu Julaa gaaffii Addis Zemen Gaazexxaaf yaroo deebisan walii galteen ABO fi mootummaa jidduu akka hin jirree dubbatanii jiru. Burqaan Oduu kana kan argame Midiyaa Zehabesha guyyaa 02/14/19 you tahu itti dabalaniis yaroo namoonni tokko tokko midiyaa irratti dubbatan akka dhaga’an kaasaniiru.
Akkuma kana MNO illee akka Mootummatti utuu irraa hirmaatee jiraate ulifnaa warra Abbootii Gadaa fi Haadha Siiqqeef jecha guyyaa tokko Obbo Lammaa Magrsaa irratti argamuu danda’a. Namootni mootummaaf hojjetan achi irratti argamuun araara mootummaa wajjin tahe gochuu hin danda’u.
Utuu ragaan kana fakkaatu jiru Jaawwar Mohammed fi Baqalaa Garbaa mootummaa wajjin walii gallee waa’ee araara xumurree jirra jedhanii uummata keenya ifatti afaanfajeessa jiru. Dubbiin kun haalan fokkisaa dha. Dhiiga ilmaan Oromoo qaalii, qaroo fi qananii tahan irratti yakka hiriyyaa hin qabne oofaa jiru. Abbaa Torbeef Iyyaana Guddaan qaba.Warri kun summii gilgilii guutanii WBO geessaa jiran duraan dursanii dhandha’amuu qabu.
Yoo dhugaan bilisoomu barbaanne diina ija baase nutti dhufu maddii isaa dhungachuu qabnu. Ija isaa keessaa baasu qabna. Basaastotaa fi gantoota diinaaf hojjetan of keessaa ququlleessuun karaa dha. Nama dhiiga ilmaan Oromoon daladaluu amannee hin teenyu.
OPDOn kaleessa TPLF ergamtuu taate hammeenya guddaa guddaa Uummata Oromoo irratti raawwataa turte. Innuu xiqqaate har’a immoo nafxanyoota warra Oromoon akka sabaati biyyaa isaa keessa jiraachuu hin qabu jedhan warra akka Biraanu Nagaa, Kononel Dawit Welde Giorgis, Konol Goshuu Waldee, Dr. Kaasaa Kabade, Shimalis Mazengaa jala galtee akka shira uummata keenya irratti xaxan ayyaana banteef jirti.
OPDOn ijaarsa Oromoo miti. Kanaaf of dandeesse ofitti boontee dhaabbachuuf rakkatti. OPDOn ulee Waaqayoo ittiin Uummata Oromoo adabaa jiru dha. Waaqayyo Uummata Oromoo karaa hundaa badhaadhaa godhee uumee jira. Qabeenya isaa kana irratti gammadee akka nagaan jiratu barbaada. Garuu Ummatni guddaan kun ofiin of bulchuu dhiifnee yaroo miila namoota nuu gadii jala jilbeefannee jiratnu nutti gaddee akka hiribaa kaanuuf OPDO nutti erge. Yaroon kaanee diina ofirra darbinu gahee jira. Harka wal qabannee Irree tokkummaan WBO wajjin wardiyaa Oromiyaa haa dhaabbannu!
SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Guraandhala 15, 2019
Haal duree dhimma araaraa ABO fi Mootummaa Itoophiyaa irratti ajajni WBO Z/K dhiyeessee akka asii gadii ta’a.